mairie-antananarivo – Fanadioavana Ambodivona – CUA
Fanadioavana Ambodivona – CUA
administrateur 12 martsa 2018 Commentaires fermés
Nanao fanadioavana faobe ireo mpivarotra braokatera rehetra sy ny mpivarotra legioma tetsy Ambodivona izay mitsofoka eo amin’ny Total ny Zoma 09 Martsa 2018 tolakandro notarihan’ny lehiben’ny tsena Andravoahangy Eric Augustin Rakotondrafara. Efa nisy ny fanentanana nataon’ny lehiben’ny tsena sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ka filazana mialoha no natao tamin’izany .
Avy hatrany dia nanadio ny tsena izay tandrify azy avy ireo mpivarotra , namafa sy nandraoka ny fako, teo koa ny fanadiovana ny lakandrano izay tsentsina. Hisy ny vahaolana maharitra hapetrahana amin’ny fanadiovana eny an-toerana manomboka izao araka ny fanambarana ny Lehiben’ny Tsena. Nisy ny fivoriana teo amin’ny mponina teny an-toerana sy ny solonten’ ny mpivarotra amin’ny faneken’izy ireo ny hanadio ny tanàna sy ny fanatsarana ny lakandrano izay asiana sarony rarivato.
Raha ny fanadiovana dia hisy latsa-keboka 100ar isan’andro, ho an’ny lankandrano kosa dia atao indroa isan-kerinandro. Ny fanamborana ny lankandrano asiana rarivato koa dia neken’izay ireo ka hisy ny tsipaipaika eo amin’ny roa tonta. Mbola hitohy ny Alatsinainay maraina izao ny fanadiovana faobe eny amin’ny Boriboritany fahatelo izay ho tontosaina etsy amin’ny tsen’Andravohangy sy ny manodidiana ny Mascar.
Fampandresesana lalana tapaka
Fanokanana ny sarivongan’i Masina Maria Andohalo